Myanmar Gays Heaven: Zwe Zin Ko Ko, if u interest him...add landslidevictory2015@gmail.com
Zwe Zin Ko Ko, if u interest him...add landslidevictory2015@gmail.com
Posted by Hot Boy at 8:20 AM
Labels: by mail, Naked Photos
aung ko November 5, 2013 at 9:50 AM
့how to contact you ?
Anonymous November 11, 2013 at 10:43 AM
Anonymous July 18, 2014 at 12:14 PM
Ko ag ko phin khan chin yin cha pay mae
လီးစုပ်ချင် တယ် အောင်၇ဲလင်း၇ဲ့ဖင် ရှာနဲ့၇ပ်ပေးချင်တယ် လိုးလဲလိုးချင် တယ် အောင်၇ဲလင်းကို homo မင်းသားတွေ ကောင်းပြည့်ဖင် လည်းချချင် တယ်
မုံ၇ွာက ရှိရင် eoeokotajo @g,mail.comကို အပ်ပါ ယောကျာင်္းပီသပြီး၇ုပ်၇ည် သင်.တင်.ရှိသော ဟိုမိုများ အပ်နိုင်ပါသည် ver ရိုလ်းပါ
Anonymous November 24, 2013 at 10:05 AM
yes i am from monywa. add musicdivine.9@gmail.com
Peter König October 26, 2014 at 8:06 PM
​ဝေလင်း October 29, 2014 at 11:26 PM
​ဝေလင်းပါ boyfriend တ​ယောက်​​လောက်​လိုချင်​ပါတယ်​ရန်​ကုန်​ကဆိုရင်​​တော့ပိုအဆင်​​ပြေတာ​ပေါ့ viber မှာခင်​လို့ရပါတယ်​ ၀၉၉၇၂၃၇၆၆၇၆ပါ
Aung Moe Thu February 19, 2015 at 7:46 AM
Unknown December 19, 2017 at 2:12 AM
min khant moe October 1, 2015 at 8:10 AM
Wai Lin Htut December 19, 2017 at 2:13 AM
Thet, log into Facebook with one click - Hi Thet, It looks like you're having trouble logging into Facebook. Just click the button below and we'll log you in. Log In With One Click If you...
မြန်မာလို့တော့ထင်တာပဲ မေးလ်ကနေပို့လိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
myanmar gays heaven myanmar gays heaven myanmar gays heaven နောက်တခါပို့ပေးရင် နာမည်လေးတွေ...
Photo of saw kyawoo and Pai Pai
ဒါလေးက ကျနော်တို့ Blog ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာဟိုမို ဒုတိယအတွဲလေးပါ။ အားပေးလိုက်ပါဦး.......ဗျာ
Ko Tan Naing............
mail ကနေပို့ပေးတဲ့အကို့ကို တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ မအားလို့ မတင်ဖြစ်တာတောင်းပန်ပါတယ်နော်
big myanmar rocket part 2
ကျနော်ဆီကို Facebook ကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြံလေးတစ်ခုပေးထားလို့ပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရှင်းရှင်းပြောရရင် အပုန်းလေးပါပဲ ခိခိ။ ကျနော်တို့ ခံ...